'ဇာတ်လမ်းတစ်ခု လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံ အပြောအဆို အနေအထိုင?? - Yangon Media Group
‘ဇာတ်လမ်းတစ်ခု လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံ အပြောအဆို အနေအထိုင??
”ဝမ်းဝမ်းလေး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံများနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်အိချောပိုနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း…..။
ဖြေ – အခုကတော့ ခရီးသွားဖို့ရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ဖို့ပါ။ ဒီလထဲမှာပဲ အိချောပါဝင်ထားတဲ့ ဂျင်းကောင်’၊ ‘ဝမ်းဝမ်းလေး’၊ ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့’ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွေလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရုံတင်ပြသဖို့ရှိပါတယ်။
မေး – ‘ဝမ်းဝမ်းလေး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလည်း မကြာခင် ရုံတင်ပြသတော့မယ်ဆိုတော့ အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲ။
ဖြေ – ဝမ်းဝမ်းလေးဇာတ်ကားက အိချောတို့ ရိုက်ထားတာလည်းကြာပြီ။ သုံးနှစ် လောက်တောင်ရှိသွားပြီ။ အချိန်ကကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ကပ်ပိုင်းတွေ၊ အဝတ်အစားပိုင်းတွေကတော့ နည်းနည်းလေး ဒိတ်အောက်သွားတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ရယ်ရတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ အနုပညာသမားတွေအားလုံး မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်လေးနဲ့ မိသားစုဇာတ်လမ်းလေးပါ။
မေး – ဒီဇာတ်ကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမှတ်တရတွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားလေး ရိုက်ကူးတုန်းကဆိုရင် မှတ်မှတ်ရရ ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေ အရမ်းကျက်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေက အရမ်းခက်တယ်။ တော်တော်လေးလည်း မှတ်ယူရတယ်။ ညပိုင်းရိုက်ရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်း များတယ်။ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ရိုက်ကြတာတွေကတော့ အဲဒါကတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
မေး – ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ ကာရိုက်တာအတွက် ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိလဲ။
ဖြေ – အိချောကို ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ဇာတ်လမ်းကြိုပေးတဲ့အချိန်ကတည်းက အိချောဇာတ်လမ်းကို အရင်ဖတ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းကို သေချာဖတ်ပြီးတော့မှ ကိုယ်လက် ခံနိုင်တဲ့ဇာတ်ဆိုရင်လည်း လက်ခံလိုက်တယ်။ လက်မခံနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ လုပ်ကွက်မရနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဆိုရင်တော့ လက်မခံဘူး။ အိချော ငြင်းလိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု အိချောလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီဇာတ်လမ်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံ အပြောအဆို အနေအထိုင် အဝတ်အစားကအစ အိချော သေချာပြင်ဆင်ပါတယ်။
မေး – အကယ်ဒမီပေးပွဲလည်း နီးလာပြီဆိုတော့ အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ထိ ရင်ခုန်နေလဲ။
ဖြေ – ရင်ခုန်တယ်။ ဘယ်သူတွေရမလဲ။ အကုန်လုံးကလည်း အနုပညာမောင်နှမ တွေဆိုတော့ အားလုံးကို ရစေချင်တယ်။ ဘယ်သူပဲရရ အိချောတို့ကတော့ အားပေး နေမယ်။ အနုပညာသမားအားလုံးအတွက်ကို ရင်ခုန်ပေးနေပါတယ်။
မေး – ပရိသတ်တွေကလည်း အိချောကို အကယ်ဒမီရစေချင်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘာပြောချင်လဲ။
ဖြေ – ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို အကယ်ဒမီ ဆိုတာမျိုး ရစေချင်တာပေါ့နော်။ အကယ်ဒမီဆိုတာကလည်း အနုပညာ လောကသားတိုင်းအတွက် တကယ်ကိုမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲလေ။ ဒါပေမဲ့လည်း အိချောဘက်ကတော့ ကြိုးစားနေဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။
'သူများနဲ့ မတူဘဲ ထူးတာကို ရိုက်ချင်တဲ့ အခါကျတော့ ပိုပြီးတော့ အားထည့် ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်' - ဒေါ်န??
ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းမ